दुई महिलाले एक नेतालाई बोलाएर गोरु चु’टाई गरे, कारण यस्तो छ ! – Khoj Dainik
November 3, 2020 adminLeaveaComment on दुई महिलाले एक नेतालाई बोलाएर गोरु चु’टाई गरे, कारण यस्तो छ !
भेट्न भनेर बोलाएर यो सब कार्य गरिएको बताइएको छ । कोतवाली प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर कांग्रेस जिल्ला अध्यक्षलाई गिरफ्तार गरेको बताइएको छ । घटना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
आर्मी ब्यारेकवाट श्रीमान हराउदा श्रीमतीको बेहाल, सीसीटीभी क्यामेरा हेर्दा जे देखियो (भिडियो सहित)